Sida loo helo istiikarada WhatsApp | Wararka IPhone
Ugu dambeyntii maalmo yar oo la isla dhexmarayo ka dib kuwani way imaan karaan istiikarada rasmiga ah ee sheekooyinka kujira barnaamijka WhatsApp, shirkaddu waxay hadda soo bandhigtay doorashadan markii ugu horreysay nooca rasmiga ah ee arjiga si aad hadda u soo dirto oo aad u hesho istiikaradahan.
Markii ugu horreysay warkan wuxuu ahaa mid gaar u ah adeegsadayaasha iyagu wata nooca beta-ka la rakibo, laakiin hadda ikhtiyaarkan ikhtiyaarrada ah ayaa durba laga heli karaa dalabkaaga xitaa haddii aanan ku jirin noocyadan beta. Xaaladdan oo kale Nooca ay ku jiraan istiikarada ayaa ah nooca cusub ee 2.21.110.15 ee dalabka.
Habka ugu fudud ee aad ku imaan karto istiikaradaani waa inaad fuliso talaabooyinka soo socda. Marka hore waa inaan sameyno waa inaad gasho sheeko, guji furitaanka qoraalka kadibna dhagsii fagaaraha yar ee qaabka folio ee ka muuqda baarka. Haatan waan gujinaynaa oo Gifyada animated-ka ayaa hubaal ka soo muuqan doona, maxaa yeelay salka Gifyadan ayaan mar kale gujineynaa bogga ka dibna riix + calaamadda. Hadda waxaan haynaa dhammaan istiikarada loo heli karo soo dejinta.
Sawirka kore waxaad si faahfaahsan uga arki kartaa tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad ugu hesho istiikarada sawirka labaad waxaad arki kartaa falaarta madow oo ah tillaabada labaad. Markaad gasho istiikarada, waxaad kala soo bixi kartaa adigoo riixaya fallaarta yar ee u muuqata dhinaca midig oo aad u aragto istiikarada aad horay ugu soo dejisay xulashada "my stickers".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Sida loo helo istiikarada WhatsApp
Boggan, sidee ayey u adeegsadaan baaraha internetka ee 'XD' shaqooyinka istiraatiijiyadda ee whatsaap horay loogu sii daayay dadweynaha dhowr bilood?
Ku jawaab teban
IPhone 13 wuxuu lahaan lahaa awood ugu badnaan 512GB